Top 10 môtô elektrika tsara indrindra misy seza | la-manette.com
Top 10 môtô elektrika tsara indrindra misy seza
Mitady fomba hijerena ny fiainana an-tanàn-dehibe ve ianao nefa tsy tsemboka nefa mahazo aina? Amin'ity torolàlana farany ity dia mizara ny 10 ambony indrindra izahay scooter elektrika misy lasely tiany indrindra. Jereo ny torohevitra momba ny fividianana feno ary valio ny fanontanianao amin'ny faran'ny lahatsoratra.
Raha te hijery ny fiainana an-tanàn-dehibe amin'ny scooter elektrika ianao nefa mbola mahazo aina rehefa mandeha lavitra, dia safidy tsara ny môtô elektrika misy seza.
Faly izahay amin'ny fitaterana maharitra toy ny scooter elektrika, ary mizaha toetra azy ireo izahay mba hahafahan'ny mpividy misafidy ny tsara indrindra. scooter elektrika misy seza noho ny filany. Na liana amin'ny marika scooter manokana ianao na ireo endri-javatra manokana toy ny endrika azo aforitra, rafitra bateria azo averina, na maotera tsy misy borosy, midira ao amin'ny torolalana ilainay raha te hahalala bebe kokoa momba ny safidintsika.
Amin'izao fotoana izao, mijanòna kely mba hianatra bebe kokoa momba ny safidintsika amin'ny scooter elektrika seza tsara indrindra.
Nahoana no mifidy scooter elektrika misy seza?
Efa matotra ianao amin'ny fikarakarana ny faharetana sy ny tontolo iainana. Maniry karazana fitaterana mifanaraka amin'ny fomba fiainanao an-tanàn-dehibe ihany koa ianao ary mety amin'ny fiantsonan'ny toerana misy toerana ambony. Fa ianao koa dia mahafinaritra ka te hiala voly amin'ny dianao isan'andro na rehefa mandeha an-tongotra miaraka amin'ny namanao sy ny fianakavianao. family ny faran'ny herinandro.
Eto no misy ny scooter elektrika misy lasely. Ny mpanamboatra scooter dia nanamboatra azy ireo ho an'ny olona efa antitra nefa mbola tanora. Azo antoka fa hitondra anao amin'izay tianao haleha ny scooter elektrika, fa ny seza misy pad dia manampy fanache ho an'ny olon-dehibe - ary toerana hialana sasatra rehefa tojo fitohanan'ny fiara ianao na miala amin'ny lalan-kizorana. Ny modely sasany amin'ny scooter elektrika dia misy seza azo esorina na mampiditra ny seza amin'ny endriny. Ny môtô elektrika sasany misy seza ho an'ny olon-dehibe dia manana lanjany hatramin'ny 300 kilao, ka azo ampiasaina amin'ny olona rehetra.
Ho fampiononana bebe kokoa
Ny karazana scooter resahina eto dia tsy môtô scooter, na dia efa zokiolona na mpamily sembana aza dia afaka mahazo tombony amin'ny iray amin'ireo modely ireo ihany koa. Ireo maodelin'ny môtô elektrika ireo dia natao ho an'ny olon-dehibe sy tanora zokiolona mba hivezivezena amin'ny fifamoivoizana an-tanàn-dehibe na lavitra kokoa. Na dia manana seza ho an'ny olon-dehibe na zatovo aza izy ireo, ireo scooter ireo dia manana singa sy endri-javatra hafa izay tsy ananan'ny môtô scooter, toy ny maotera haingana kokoa sy ny kodiarana kely kokoa.
Ny scooter elektrika dia manome anao fahatsapana angovo sy herinaratra, na mandeha miasa ianao, na mankany amin'ny fivarotana hividy zavatra adinonao, na mandehandeha manodidina ny sakana mba hanadinoanao ny ahiahinao. Na dia maro aza ny olona mihevitra ny scooter ho toy ny fitaovam-pitaterana mitsangana, ny seza dia manome toerana malalaka kokoa mitaingina nefa tsy manao sorona ny fahalalahana sy ny fahafaha-manao izay ankafizin'ny mpitaingina maro. Ny scooter sasany dia afaka mahatratra ny hafainganam-pandeha manodidina ny 30mph ary afaka mandeha manodidina ny 40 kilaometatra amin'ny fiampangana tokana, ka na dia lavitra aza ny dianao dia misy safidy ho anao.
Ny fahombiazan'ny angovo sy ny fanajana ny tontolo iainana
Ny scooter elektrika misy seza dia tsy kilalaon'ny ankizy na bisikileta nohatsaraina. Ity dia fiara mitsitsy angovo izay ahafahanao mampiseho ny lafiny mahafinaritra anao any ivelany. Ny safidy scooter elektrika seza tsara indrindra dia maka izay tian'ny mpampiasa momba ny endriny tany am-boalohany ary manandratra azy ireo amim-pahamendrehana, manambatra motera matanjaka miaraka amin'ny endri-damaody toy ny lampihazo volotsangana.
Tohizo ny famakiana raha te hahalala bebe kokoa momba ny safidintsika ambony indrindra ho an'ny scooter elektrika misy seza. Ho an'ny safidy scooter elektrika bebe kokoa, kitiho eto ho an'ny torolàlana momba ny fividianana farany 2021 izay mizaha toetra sy mandinika 14 amin'ireo scooter elektrika tsara indrindra eny an-tsena. Satria tena mino izahay fa ny scooter elektrika dia ho an'ny rehetra, aza hadino ny mijery ireo safidy fanampiny amin'ny scooter elektrika tsara indrindra ho an'ny olon-dehibe izay mavesatra kokoa.
1. Inokim Light 2 + Seza
Haingam-pandeha ambony indrindra: 40 K / H
Hazakazaka: 100 km
Haben'ny kodiarana: 10 santimetatra
Garantie: 12 volana
Ny Inokim Light 2 dia laharana voalohany amin'ny lisitry ny scooter elektrika mipetraka noho ny antony maro. Ny fananganana aliminioma sy ny bateria lithium-ion LG 36V 10,4Ah dia mampifandray ny fahaiza-mitondra sy ny fampisehoana tsara indrindra. Miaraka amin'ny ora fiampangana adiny efatra - sy ny fahafahana mandefa any amin'ny fivoahana rehetra - tsy hanahy ny ho tavela ianao. Miforitra haingana amin'ny tsindry iray izy io, mihena ho 37x10x14 santimetatra eo ho eo.
Ny endri-piarovana dia misy fampisehoana LCD, jiro LED mitambatra, frein amponga aoriana ary fanakatonana maotera mandeha ho azy. Ny seza dia azo amboarina (avy amin'ny 18,1 santimetatra ka hatramin'ny 24,8 santimetatra), ary ny pad hoditra dia manome fampiononana sy fanamorana ny fanadiovana. Miforitra tsara koa ny seza rehefa tsy ampiasaina. Ny Inokim Light 2 dia manana motera 350W 36V gearless hub izay mahatratra tampon'ny 650W, milanja 23KG (tsy misy seza) ary 100KG ny entana ambony indrindra, izay ampy ho an'ny ankamaroan'ny mpitaingina bisikileta.
2. EMOVE Cruiser + Seza
Haingam-pandeha ambony indrindra: 40 KM
Ny EMOVE Cruiser dia natao ho an'ny dia lavitra. Miaraka amin'ny ora manokana 9-12 ora fiampangana sy 100KM fiainana bateria, dia afaka mahazo miasa manodidina ny 24KM efa ho tapa-bolana nefa tsy lany ranom-boankazo. Izany ve ny fizakan-tena? Izany dia noho ny bateria LG 52V 30Ah mahagaga miaraka amin'ny fahafaha-manao 1Wh.
Fantatra amin'ny rojo vy 10-inch midadasika, fampiatoana roa eo anoloana ary fiatoan'ny rivotra ao aoriana, ity scooter elektrika ity dia maharitra sy azo itokisana. Miaraka amin'ny lanjan'ny 352 kilao, ity maodely scooter ity dia mahazo aina ho an'ny ankamaroan'ny olon-dehibe. Ny EMOVE Cruiser dia tonga miaraka amin'ny lakile miady amin'ny halatra tokana ho an'ny scooter elektrika tsirairay. Izy io koa dia mahatohitra rano ary afaka miasa amin'ny mari-pana ambany 0 degre. Ny maotera DC tsy misy borosy 600W dia manome hery ny milina ary mamela anao hahatratra ny hafainganam-pandeha ambony indrindra 40KM.
Ny singa hafa dia mahatonga ity maodely scooter elektrika ho an'ny olon-dehibe ity ho safidy tsara indrindra ho an'ny mpitaingina maro: frein hydraulic hybride aloha sy aoriana, jiro eo anoloana, jiro eo amin'ny axle eo anoloana, famantarana famantarana ary jiro frein aoriana. Ny seza misy padded dia misy takelaka fototra, fantsona hydraulika miitatra, ary mekanika mihidy.
3. Segway Ninebot ES2 + seza
Haingam-pandeha ambony indrindra: 25 K / H
Faritra: 25.5 KM
Haben'ny kodiarana: 8 santimetatra
Segway dia lasa lavitra noho ny fanaovana hoverboard lehibe miaraka amin'ny tahony. Ireo mpitaingina scooter elektrika misy seza dia hahita ny Segway Ninebot ES2 KickScooter safidy manara-penitra sy ara-toekarena. Ity môtô scooter ity dia manana fotoana famandrihana 3,5 ora ary aforeto amin'ny tsindry iray, mba hahafahanao mitondra azy amin'ny fitateram-bahoaka na mitahiry azy mora foana ao anaty fiaranao.
Vakio ihany koa: Fampiharana fanaterana sakafo tsara indrindra any Canada
Misy amin'ny bodywork volontsôkôlà volafotsy izay manampy fikasihana be pitsiny, ny Segway Ninebot ES2 KickScooter dia manana fiarovana amin'ny scooter elektrika miaro azy amin'ny hafanana be loatra sy ny enta-mavesatra be loatra. Izy io koa dia manana rafitra fanamafisam-peo eo anoloana sy aoriana, frein elektrika, frein mekanika ary jiro LED eo anoloana. Ny famolavolana azy aza dia mahatanty rano ka ny hamandoana kely dia tsy mandondona anao.
Miaraka amin'ny hafainganam-pandeha ambony 25K / H sy ny isan-karazany 25KM (tsara indrindra), dia tsy mifanaraka amin'ny safidy roa etsy ambony, fa tena lafo, ka raha miasa amin'ny teti-bola dia mety ho safidy mafy.
4. Mercane WideWheel PRO + Seza
MPANDRESY NY TERRAIN REHETRA
Haingam-pandeha ambony indrindra: 42 K / H
Faritra: 35 KM
Raha nihevitra ianao fa tsy azo atao ny manala scooter elektrika hiala amin'ny lalana voadaroka, ny Mercane WideWheel PRO dia hahatonga anao handinika indray ny fitsaranao. Miaraka amin'ny kodiarana 4 santimetatra ny sakany ary ny fahafahana miakatra amin'ny fitongilanana manodidina ny 30 degre, dia scooter matanjaka ho an'ny mpitaingina izay tia eny ivelany nefa tsy te hiady amin'ny bisikileta.
Ity scooter elektrika mipetraka ity dia misy lakolosy sy kickstand, saingy misy fanaraha-maso mandehandeha ihany koa rehefa mandeha eny amin'ny sisin-dalana ianao. Miaraka amin'ny halavirana manodidina ny 35 KM, môtô elektrônika ho an'ny olon-dehibe izy io izay tena afaka mandeha lavitra, saingy mbola tsy dia be loatra izany raha jerena ny vidin'ny vidiny.
Ny kodiarana dia mafy ary 8 santimetatra izay midika fa misy fikojakojana kely indrindra ary ny fametrahana maotera roa izay miakatra amin'ny 1600W dia manome haingam-pandeha. Miaraka amin'ny enta-mavesatra 119KG dia tokony ho ampy ho an'ny ankamaroan'ny mpitaingina izany.
5. Razor E300S mipetraka scooter elektrika
TSARA HO AN'NY ZAZA
Haingana ambony indrindra: 24KM
Hazakazaka: 16 km
Lanja: 9 KG
Haben'ny kodiarana: 9 santimetatra
Garantie: 3 volana
Ny Razor E300S Seated Electric Scooter dia manana endrika mikitoantoana tsaroan'ny mpitaingina maro avy amin'ny scooter Razor tamin'ny fiandohan'ny taona 2000, nohatsaraina tamin'ny endrika endrika toy ny seza ho an'ny olon-dehibe (na zatovo te-hiala sasatra).
Miaraka amin'ny rafitra vy rehetra sy ny maotera rojo haingam-pandeha tokana, ity scooter Razor ity dia manolotra fiara mafy sy azo antoka, noho ny kodiarana lehibe eo anoloana sy aoriana. Ny throttle grip ho an'ny fanafainganana sy ny frein aoriana miasa amin'ny tanana dia mahatonga ity modely ity ho mora ampiasaina ho an'ny olon-dehibe sy ny tanora.
Manodidina ny 40 minitra eo ho eo ny fiampangana tokana, izay mety tsara amin'ny fiara mankany amin'ny tranon'ny namana na mandehandeha manodidina ny sakana mba hahatsapana ny lalana mandalo. Miaraka amin'ny lanjan'ny 100 KG ny Razor E300S dia fomba tsara ho an'ny ankizy sy ny zatovo miala amin'izany rehetra izany nefa tsy mila mandeha lavitra.
Kodiarana lehibe indrindra
Haingam-pandeha ambony indrindra: 28 K / H
Faritra: 20 KM
Haben'ny kodiarana: 16 santimetatra
Ny scooter elektrika EcoSmart Metro dia manambatra ny endrika Razor mahazatra amin'ny toe-tsaina saro-takarina, noho ny tokotanin'ny bamboo midadasika sy ny fitoeran'entana sy harona azo esorina. Ity môtô misy seza ity dia manana kodiarana malama 16-inch mba hifehezana ny tany mikitoantoana.
Ny seza ho an'ny olon-dehibe malemilemy sy feno pad, mora fehezina ny throttle manual grip, ary ny frein tanana dia mahatonga ny Razor EcoSmart Metro ho zanak'olo-mpiray tam-po amin'ny scooter elektrika seza hafa. Saingy eo ambanin'ity endrika kanto ity, ny Razor EcoSmart Metro dia manao asa betsaka ihany koa. Izy io dia manana maotera matanjaka 500 W izay mety hahatratra 24 k / h.
Ny fiampangana bateria dia natao hanomezana 60 minitra fampiasana tsy tapaka, izay mamporisika ny olon-dehibe hanainga ny tongony amin'ny diany isaky ny miantso azy ireo ny lalana na ny hazakazaka akaiky. Ny familiana kodiaran-damosina dia mahatonga ny Razor EcoSmart Metro ho mora hitantana sy hanatsara ny traction.
Ho an'ny vidiny mitovy ihany, Razor dia manolotra ihany koa ny EcoSmart Metro HD scooter elektrika izay manana specs mitovy fa miaraka amin'ny hafainganam-pandeha miovaova 350W, torque avo, tsy misy borosy, kodiarana aoriana ary maotera hub. Jereo izany raha tianao ny scooter elektrika misy motera hub fa tsy misy fahasamihafana lehibe amin'ny vidiny.
7. Razor E200S mipetraka scooter elektrika
Haingam-pandeha ambony indrindra: 19 k/ora
Hazakazaka: 14 km
Dika lehibe kokoa sy lava kokoa ary haingana kokoa amin'ny Razor E100, ity scooter elektrika Razor ity miaraka amin'ny seza dia manasongadina ny hatsembohana izay atokisan'ny mpitaingina (sy ray aman-dreny maro). Izy io dia manana rafitra vy feno sy fork, ary koa ny kodiarana.
Tsy toy ny scooter elektrika sasany, ity maodely Razor ity dia miaraka amin'ny seza ho an'ny olon-dehibe na zatovo efa napetraka amin'ny vidiny mora. Azonao atao ny manala ny seza mba hitsangana. Ny frein aoriana miasa amin'ny tanana sy ny throttle grip dia mamela ny fifehezana miovaova mitovy amin'ny maodely scooter Razor hafa.
Ny Razor E200S dia latsa-danja amin'ny fifaninanana raha ny hafainganam-pandeha ambony indrindra sy ny isan-karazany, fa mbola tolotra tena azo ampiharina raha toa ka eo amin'ny teti-bola ianao ary mankafy mitondra fiara.
8. Inokim Quick 4 + seza
Safidy mahazatra kokoa
Haingam-pandeha ambony indrindra: 40 k/H
fizakan: 40 km
Ny Inokim Quick4, izay misy amin'ny dikan-teny Hero sy Super, dia môtô elektrika azo aforitra mahazatra natao ho fampiononana sy hery. Vita amin'ny alimo, ity scooter elektrika ity dia mahafeno ny fiampangana ao anatin'ny adiny fito ary misy jiro anatiny sy frein amponga eo anoloana sy aoriana.
Ny endri-javatra hafa dia misy ny fampisehoana LCD sy ny tànana mitambatra izay ahafahanao mitondra ny scooter-nao ao an-trano rehefa ilaina izany. Ampio ny seza ho an'ny olon-dehibe, ary afaka midona amin'ny lalana ianao, miaraka amin'ny halaviran'ny tena zava-misy manodidina ny 40 km noho ny bateria Samsung Li-ion 52V 16Ah.
9. EMOVE Touring + seza
Dika maivana kokoa
Dika maivana kokoa amin'ny EMOVE Cruiser, ny scooter elektrika EMOVE Touring dia manolotra fahafaha-mitondra miavaka, miforitra ao anatin'ny segondra. Ny famolavolana azy dia misy fampiatoana telo sosona eo anoloana ary fampiatoana lohataona indroa ao aoriana ho an'ny fandehanana milamina amin'ny terrain samihafa, ary koa ny rojo vy mirefy 7 santimetatra ho an'ny fitoniana. Ity môtô scooter ity dia misy tandroka, jiro eo anoloana, jiro eo anoloana ary jiro frein aoriana, ary ecran LCD.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fampiasana an-tariby ny controller Xbox One anao amin'ny Nintendo Switch
Ny sehatra dia novolavolaina mialoha ho an'ny seza ho an'ny olon-dehibe azo amboarina, izay mora apetraka miaraka amin'ny takelaka fototra sy ny mekanika fanidiana. Miaraka amin'ny fiampangana batterie izay maharitra 40 km eo ho eo ary ny lanjan'ny olon-dehibe, ity maodely scooter elektrika ity dia safidy tsara ho an'ny halavirana sy ny dia fohy kokoa.
Môtô DC 48V 500W tsy misy borosy no mitondra an'io modely io ary ny bateria LG 48V 13AH lehibe dia mamela azy handeha lavitra. Safidy mafonja ho an'ny mpampiasa mavesatra kokoa izy io miaraka amin'ny tanjaka ambony indrindra 150 kg.
Noho ny sandany miavaka sy ny kalitaon'ny fiara azo antoka, ny Touring dia manao ny lisitry ny "scooter elektrika tsara indrindra ho an'ny mpandeha".
Dika avo lenta
Haingam-pandeha ambony indrindra: 25 k/H
fizakan: 25 km
Lanja: 29.5 lbs
Haben'ny kodiarana: 8,5 santimetatra
Ny Hiboy S2 dia môtô elektrika ara-toekarena manana endri-javatra avo lenta. Izy io dia mampiaraka amin'ny alalan'ny Bluetooth miaraka amin'ny fampiharana Hiboy S2, izay ahafahanao mampifanaraka ny valin-teniny amin'ny frein, ny hafainganam-pandehany ary ny fifehezana fitsangatsanganana, ary na dia ny manidy ny scooter anao amin'ny findainao aza.
Tian'ny mpamily ihany koa ny batterie lithium-ion, taitra roa aoriana, jiro, ary jiro LED. Manampy izany ny seza ergonomic, ary ny Hiboy S2 dia lasa scooter elektrika mipetraka izay mahafinaritra amin'ny teknolojia avo lenta, indrindra raha jerena fa ny fiampangana amin'ny bateria lithium dia afaka maharitra 15 kilaometatra.
Fanontaniana matetika momba ny scooter elektrika misy seza
Misy ve ny androm-piainan'ny scooter elektrika misy seza?
Araka ny voalazanay tao amin'ny Torolàlana momba ny fividianana scooter elektrika farany, ny androm-piainan'ny scooter elektrika dia miankina amin'ny fampiasanao azy sy ny fomba fanamboarana azy. Raha raisina tsara izany, dia mety haharitra telo ka hatramin'ny dimy taona ny modely lafo vidy kokoa. Ny maodely scooter amin'ny ambaratonga fidirana dia mety haharitra iray na roa taona eo ho eo.
Inona ny androm-piainan'ny bateria scooter seza elektrika?
Na dia mety miovaova arakaraka ny karazana bateria aza izany, dia misy toro-hevitra momba ny fikarakarana bateria ankapobeny izay afaka manampy ny scooter elektrika mipetraka mandritra ny fotoana maharitra. Ny Razor dia manoro hevitra ny famandrihana ny batterie scooter-nao aorian'ny fampiasana tsirairay satria mety hisy fiantraikany amin'ny hafainganam-pandeha ny fiampangana ambany. (Môdely maromaro, ny sasany amin'izy ireo dia ao amin'ny lisitray, dia manana fiarovana izay manakana anao tsy handoa be loatra ny bateria).
Raha tsy maintsy mitahiry ny scooter-nao mandritra ny herinandro na volana ianao noho ny toetry ny andro, dia fenoy feno ny bateria alohan'ny hanaovana izany. Ampidiro tsindraindray izany raha mbola ao anaty tahiry mba hitazonana ny angovo ho vaovao, hoy i Razor.
Na dia mahatanty rano aza ny scooter-nao, ny orana mivatravatra sy ny hafanana mangatsiaka dia mety hanafohy ny androm-piainan'ny bateria, noho izany dia tsara indrindra ny mitahiry ny scooter-nao ao an-trano rehefa tena mihena ny maripana. (Raha toa ianao ka mahatsiaro ho mangatsiaka ao amin'ny garazy, ento ao an-tranonao na any amin'ny toerana tsy dia mangatsiaka loatra ny scooter anao).
Nahoana no zava-dehibe ny fahafahan'ny entana amin'ny scooter elektrika mipetraka?
Ny enta-mavesatra ambony indrindra na ny tanjaky ny lanja dia manondro ny zavatra azon'ny scooter elektrika mipetraka eo am-pelatananao. Ny scooter elektrika misy seza dia mety ho fomba mahafinaritra hiantsenana, indrindra raha misy harona toy ny scooter elektrika Razor EcoSmart Metro. Fa ny enta-mavesatra ambony indrindra dia manondro ny totalin'ny totalin'ny tetezana, izany hoe ny mpamily sy ny entana azo atao.
Ny maodely feno entana dia ahafahan'ny olon-dehibe lava iray mitaingina am-pilaminana sy mihetsika miaraka amin'ny fitoniana. Saingy araka ny hazavainay ao amin'ny torolàlana momba ny fetran'ny lanjan'ny scooter elektrika, matetika ireo modely ireo dia miaraka amin'ny batterie sy motera matanjaka kokoa. Arakaraka ny lehibe kokoa ny bateria sy ny maotera, ny mavesatra kokoa ny scooter elektrika, izay misy fiantraikany amin'ny fifindrany sy ny vidiny.
Raha fintinina, raha mila môtô elektrika misy seza azonao entina eny an-tanàna na any amin'ny biraonao ianao, dia mety tsy ny modely matanjaka no safidy tsara indrindra ho anao. Saingy raha tsy maintsy misafidy an'io safidy io ianao, ny ankamaroany dia azo aforitra tsara ka azonao entina ao anaty vata fiara.
Afaka miakatra havoana ve ny scooter elektrika mipetraka?
Fantatsika fa ny fanosehana scooter amin'ny tanana eny an-tampon-kavoana dia toa fomba sarotra hanaovana fanatanjahan-tena, na dia midina any amin'ny morontsiraka aza ianao. Tsy mila manahy momba izany ianao amin'ny scooter elektrika.
Ny scooter elektrika dia matetika afaka mandeha amin'ny havoana sasany, na dia miankina amin'ny herin'ny maotera, ny lanjan'ny mpitaingina ary ny hafainganam-pandehany aza ny naoty. Ny iray amin'ireo maodely ao amin'ny lisitray, ny Mercane WideWheel PRO, dia mahazaka gradient manodidina ny 30 degre. Tsy milaza izahay fa mitovy amin'ny fampitomboana ny araben'i San Francisco izany, fa ny famolavolana rafitra misy maotera roa dia matetika manome anao ny herin'ny soavaly tadiavinao amin'ny fampisehoana mahery vaika.
Ahoana no hampijanonana ny scooter elektrika misy seza?
Mety ho toa adaladala io fanontaniana io, saingy tsy mahazatra. Satria ny scooter - elektrika na tsia - dia tsy manana pedal, ny olon-dehibe izay tsy mbola nitaingina iray dia sarotra ny mieritreritra ny fomba hijanonana rehefa manomboka mihodina izy ireo.
Matokia fa ny scooter elektrika dia natao ho fiarovana ny mpamily ao an-tsaina, anisan'izany ny frein. Maromaro ny maodely Razor misy frein tanana mahazatra, toy ny mandeha amin'ny bisikileta, fa ny hafa kosa manana frein kapila iray na roa. Ny modely avo lenta, toy ny EMOVE Cruiser, dia manana freins hydraulic.
Raha manahy ianao sao tsy mahafantatra ny fomba fiatoana dia angataho ny hanandrana hitondra ny scooter elektrika anao lavidavitra eny amin'ny toeram-piantsonan'ny fiara na mangataha mpivarotra hanome anao fihetsiketsehana.
Torohevitra fiarovana ho an'ny scooter elektrika misy seza
Tokony hitondra scooter elektrika eny an-dalana na eny an-dalana ve ianao?
Fantatsika avy amin'ny traikefa fa mitondra tsiky ny scooter, na ny fahitana ny tanàna akaiky tsy misy fahasorenana noho ny fitohanana na ny fandehanana eny amin'ny zaridainam-panjakana amin'ny seza scooter. Saingy ny olon-dehibe mitaingina scooter - elektrika, manual, misy seza na tsy misy seza - dia tsy maintsy mankatò ny fitsipiky ny lalana, raha tsy izany dia mety ho naratra mafy.
Raha efa zatra manao izany ianao satria efa nanana scooter teo aloha na nizara ny lalana tamin'ny alalan'ny bisikileta na môtô, dia tsara ny lalanao ho lasa mpitaingina scooter elektrika azo antoka. Betsaka ny fahefana manana lalàna milaza fa ny scooter dia tokony ho eny amin'ny arabe na amin'ny lalan'ny bisikileta fa tsy amin'ny sisin-dalana, fa tsara kokoa ny manamarina ny lalàna eo an-toerana alohan'ny handehanana.
Ahoana ny fomba hitondrana scooter elektrika
Raha mbola tsy nitaingina scooter elektrika misy seza ianao dia tokony ho fantatrao fa tsy misy hafa ny mandeha scooter pedal na scooter elektrika. Nomenay anao ny torolalana mizotra amin'ny fitaingina scooter elektrika, izay mampiseho anao ny fototra, toy ny fomba fametrahana ny tongotrao amin'ny tany mba hitazonana ny fifandanjanao. Miaraka amin'ny scooter elektrika mipetraka, dia manomboka amin'ny toerana mipetraka ianao fa tsy mitsangana, izay tokony hanamora ny fifandanjana amin'ny voalohany.
Vakio ihany koa: 10 Best Web Browsing Apps ho an'ny iPhone: Alternatives tsara indrindra amin'ny Safari
Rehefa mitaingina dia tadidio fa ny fahalemem-panahy sy ny tsy miovaova no zava-dehibe. Mety hanomboka amin'ny fihetsehana miadana sy tsy miovaova amin'ny accelerator ianao. Hampitomboinao tsikelikely sy tsy tapaka ny hery. Rehefa tonga ny fotoana hijanonana dia atsangano miadana fa mafy ny frein.
Ny fihetsehana tampoka na mikoropaka dia mety hahatonga anao hianjera amin'ny scooter, na dia mipetraka aza, na hianjera. Tokony hipetraka amin'ny toerana mahitsy koa ianao; Manova ny ivon'ny fifandanjanao ny fitongilanana, mihemotra na miankavanana ary mety hianjera ihany koa.
Tohizo hatrany ny masonao. foana.
Ny mpitaingina bisikileta, indrindra ny ao an-tanàna, dia manana fahazarana mijery ny mpandeha an-tongotra mivoaka amin'ny sisin-dalana, manokatra varavaran'ny fiara mijanona, ary ireo toerana mafana hafa. Tokony hampitandrina toy izany koa ny mpamily scooter.
Ny scooter elektrika na misy seza dia mety ho milamina kokoa, saingy tsy midika izany fa mila miala sasatra ianao. Rehefa mitaingina ianao, dia tokony ho mailo amin'ny mpitondra fiara hafa, ny mpandeha an-tongotra ary ny mpitaingina bisikileta, ary koa ny asfalta mivembena na loza hafa mety hahatonga anao ho very ny fifandanjanao.
Indrindra indrindra, aza mandefa hafatra an-tsoratra raha eo amin'ny scooter, na dia mamela anao hipetraka aza ny maodely na raha misy fitoeran-kaopy na fipetrahana ho an'ny findainao. Na ireo mpanamboatra ny Hiboy S2 aza, izay tonga miaraka amin'ny fampiharana handrindrana ny hafainganam-pandeha, ny valin'ny frein, ary ny fanaraha-maso ny sambo, dia manoro hevitra anao hanamarina ireo endri-javatra ireo rehefa mijanona ianao na eny amoron-dalana.
Mamelà anay amin'ny filazana ny mazava, fa ny fiarovan-doha tsotra dia afaka mamonjy ny ainao. Ny antontan'isa avy amin'ny National Highway and Traffic Safety Administration dia mampiseho fa ny mpitaingina bisikileta manao fiarovan-doha dia mihena 51% ny ratra amin'ny lohany ary mihena 44% ny mety ho faty. Ny kaominina sasany, toa an'i New York City, dia mitaky ny olona mitaingina e-scooter sy e-bisikileta misy accelerators mba hanao fiarovan-doha.
Araka ny antontan'isa hafa, ny lozam-pifamoivoizana mahazatra indrindra amin'ny scooter elektrika dia fianjerana (manodidina ny 80%), ary ny ratra mahazatra indrindra dia ny ratram-doha (manodidina ny 40%). Ataovy toy ny fomba fitateram-pitaterana hafa ny scooter-nao, ary arovy ny atidohanao ho toy ny fananana sarobidy. Raha mamehy ny fehikibonao ao ambadiky ny kodiarana ianao - na manao fiarovan-doha amin'ny bisikiletanao - mitafy iray rehefa mandeha amin'ny scooter ianao, na dia mandeha lavitra fotsiny aza ianao. Mila fanampiana amin'ny fisafidianana ny fiarovan-doha sahaza ho an'ny scooter elektrika anao? Jereo ny torolàlana momba ny fisafidianana satroka.
Raha resaka casque, raha tsy manana visor ny anao, dia manoro hevitra ny mpamily ny hanao solomaso masoandro foana. Ankoatra ny fanampiana anao hahita tsara kokoa amin'ny tara-masoandro mivantana, ny solomaso (eny fa na dia ny vidiny mora aza) dia hiaro anao amin'ny bibikely sy ny vovoka eny an-dalana izay mety hiditra ao amin'ny masonao sy hanelingelina anao. Sarotra ny mifantoka amin'ny zava-mitranga eo anoloanao na ny mamily tsara rehefa mihazona ny tanany amin'ny tanana iray satria mihosotra ny masonao.
Raha mila mandeha lavitra ianao amin'ny alina na amin'ny hazavana maivana, dia ataovy izay hahazoana antoka fa ny anao scooter elektrika misy lasely misy jiro matanjaka eo anoloana. Maro amin'ireo modely arosonay eto no misy jiro, saingy miankina amin'ny toerana itaingenanao dia mety mila modely mamiratra kokoa ianao.
Hamarino fa misy jiro manazava tsara ny lalana eo anoloanao ny môtô anao - ary atsipazo midina kely izany mba tsy hanazava ny fifamoivoizana. Hisaotra anareo ny mpamily sy ny mpandeha an-tongotra hafa.
Ny jiron'ny rambony dia tsy mila manjelanjelatra loatra satria izy ireo no ampiasaina voalohany hanehoana ny toerana misy anao amin'ny hafa. Saingy raha ambany loatra amin'ny tany izy ireo ary amin'ny hazavana maivana dia mety ho sarotra ny hahita ny scooter-nao avy ao aoriana. Manoro hevitra anao izahay hitaingina miaraka amin'ny jiro fanampiny azonao apetaka amin'ny lobakao, kitapo, harona na fitoeran'entana.
Ny toro-hevitra etsy ambony dia hanampy anao hijanona ho voaro, saingy nanangona lisitra feno momba ny toro-hevitra momba ny fiarovana avy amin'ny mpitaingina scooter elektrika maherin'ny 2 izahay, izay azonao jerena amin'ny antsipiriany.
Na mitady fiara afaka mandeha lavitra izy ireo, na fomba mora sy mitsinjo ny tontolo iainana, dia mihamaro ny olon-dehibe mitodika amin'ny scooter elektrika. Ny endrika misy seza dia iray izay manintona ny olon-dehibe isan-karazany noho ny fampiononana sy ny fahaizany.
Raha azonao atao ny manampy harona na fitoeran'entana rehefa ilaina izany, dia saika manana fiara eo am-pelatananao ianao, saingy amin'ny fanjifana solika tsara kokoa. Mora kokoa ihany koa ny mijanona. Ny scooter elektrika misy seza dia tsy mila toerana fiantsonan'ny fiara feno, fa takelaka vita amin'ny simenitra na sisin-dalana misy hidin-trano mafy mba hiarovana ny fiaranao.
Ny vokatra micro-mobility no fitiavanay. Faly izahay manabe ny vahoaka amin'ny karazana fiara mandeha elektrônika rehetra, anisan'izany ny scooter elektrika misy seza, mba hahafahantsika mandroso mankany amin'ny ho avy tsy misy fitohanan'ny fifamoivoizana sy tsy dia mamoaka gazy karbonika. Mitsidika ny tranonkala mihitsy aza izahay mba hahitana fihenam-bidy manokana sy kaody tapakila avy amin'ny marika malaza, koa araraoty ity programa natao hamonjena vola anao rehefa vonona hividy ianao.
Raha manana fanontaniana fanampiny momba ny fisafidianana scooter elektrika misy seza mety aminao ianao dia afaka manampy izahay. Kitiho ny "Contact Us" hanoratra aminay, na hanaraka anay amin'ny media sosialy. Ho faly izahay hanampy anao hizotra amin'ny lalana marina.
Ny mpizara GTA RP tsara indrindra sy ny fomba hidirana amin'izy ireo